Badhaasotan argadhe keessaa inni kun adda – Alii Birraa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBadhaasotan argadhe keessaa inni kun adda – Alii Birraa
Badhaasotan argadhe keessaa inni kun adda – Alii Birraa
Doktarri Kabajaa Artiist Alii Birraa sirboota 260 ol sirbuuun badhaasota garaagaraa 30 ol argateera
(bbccomafaanoromoo) —Bara 1948 Dirree Dhawaatti dhalatee Umurii isaa ganna 14tti baandii muuziqaa hiriyaa jaalalaa keessatti weelluu kan eegale Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa ‘Badhaasa Umurii guutuu Odaa’ argachuun isaa gammachuu addaa akka kenneef dubbata.
Jireenya isaa muuziqaa waliin waggoota 50 ol darbaniif tureen fi ammas itti jiruun sirboota 260 ol sirbuuun Hawaasa Oromoo addunyaa gara garaa irraa badhaasota 30 ol kan argate Artiist Alii Birraa, hawaasa Oromoo biyya keessaa irraa badhaasa kan argachuu isaatti gammaduu BBC’tti himee jira.
”Badhaasa umurii guutuu hawaasa Ameerikaa kaabaa, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa irraas argadheen jira kuni arfaffaa dha.”
“Garuu isa kana adda kan godhu biyya ofiititti fi saba ofiirraa gaheen gumaacheef kanan argadhe waan ta’eef gammachuu guddootu natti dhagaahama, isa arfaffaa ta’uus ani akka tookoffaattin ilaala” jedha.
Aartiin Oromoo bakka gahuu malu hin geenye kan jedhu Artiist Alii Birraa, dhaloonni kana booda dhufus kan amma jirus warra badhaafamne irraa fakkenya fudhachuun aartii Oromoo galma barbaadamuun gahuuf akka tattaafatan dhaameera.
Weelluuwwan Artiist Alii Birraa duuba
Walaloo sirboota Dooktara kabajaa aartiist Alii Birraa hawaasa biratti hedduu jaalataman kan akka AB jennee kaanaa, gammachuun goobana ji’aa fi kannen biroo hedduu kan barreessan qorataa hawaasaa, aadaa, seenaa fi aartii Dr. Gammachuu Magarsaa, Alii Birraa umuriisaa guutuu nama aartii Oromoof jiraatedha jedhan.
”Alii Birraa ijoolummaarraa ka’ee wayee Oromoo karaa walalootiin osoo boodatti hin jedhiin nama waan baay’ee hojjete ammas hojjechaa jiru dha.”
Badhaasa Odaa irratti Abbootii Gadaa dabalatee keessummootaa hedduutu qooda fudhate
“Nama umuriisaa guutuu Oromoof kenne, karaa muuziqaatiin ammoo hangafa hundaati” jedhu Dr. Gammachuun.
Sirboota qabsoo fi kanneen biroo baay’ee waliin kan hojjetan ta’uu kan dubbatan Dr. Gammachuun wantin dandeettiisaa ol ani gumaache hin jiru walumaan mari’annee hojjetaa turre jedhu.
Baroota darban keessa namoota aartii Oromoo keessatti hojii gurguddoo wajjin hojjetan keessa Weellisaa Abdullaahii Jirmaas nama maqaan isaa ka’uu malu akka ta’e BBC’tti himaniiru.
”Waltajjiin akkana qarumaahuu hin jiru”
Waltajjiin itti aartii Oromoo jajjabeessan akkanaa kanaan dura qarumaa hin turre jedhu Dr. Gammachuun.
“Aartii Oromoo waanni jedhamu afaan Oromoo wajjiin, aadaa Oromoo wajjiin, amantii Oromoo wajjiin hundi isaa walqabatee hin sodaatamas, hin jibbamas, hin tufatamas malee Oromoo jajjabeessuf hanga waanan dhengadda arge sanatti hin turre” jedhan.
Waltajicha irratti miira jajjabinaa fi gammachuutu natti dhagaahame kan jedhan Dr. Gammachuun, ”ijoolleen ilmaan keenya taatu kaaniif ammo kan akaakayyuu taatu aadaa Oromoo kan jibbamee tuffatamee gatamee ture akka inni gatii guddaa baasuu agarsiisani, ammayyesanii dhiyeessan” jedhan.
”Oromoon deebi’ee Oromummaa isaatti akka boonu akka lafeen dugdaasaa caccabe sun suphamu godhaniiru” jedhu.
Badhaasni Odaa akkamitti qophaa’e?
‘Oda Award’ Walta’insa Maltii miidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaamii fi Biroo aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin aartii fi aartistota Oromoo miiraa waldorgommii keessa galchuun hojiilee aartii Oromoo sadarkaa isaanii eeggataniifii fedha haawaasaa guutan akka hojjetan kakaasuu kan kaayyefate akka ta’e hooggantuun Maltii miidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaamii gaazexessituu Bashaatuun himteetti.
“Seenaa aartii Oromoo keessatti qophiin badhaasaa guddaa akka kanaa ta’ee waan hin beekneef sagantaa kana qopheessuun ulfaataa ture.”
“Deeggartoota aartii hedduu argachuun ulfaataa waan ta’eef, baasiidhuma kootiin wanta narraa eegamu hojjedhen agarsiisa jedheen itti seenes,” jetti Bashaatuun.
Hojiilee aartii bara 2009 keessa hojjetamanii fi biyya keessatti hojjetaman adda baasuun, abbootiin seeraa ogummaa aartii garagaraa keessa jiran qabxilee filatamaniin calalliin raawwatuus himteetti.
Callallii boodas namoota marsaa dhumaaf darban uumanni karaa ergaa gabaabaa akka filatan taasifamuu dubbatti Bashaatuun.
Sagaleen uummataa harka 40 yoo qabaatu harki 60 ammoo maddaallii saayinsaawaa ogeeyyiiti jetti.
“Badhaasni kun bara baraan kan kennamuu waan ta’eef kan barana hojiilee bara 2009 keessatti hojetaman qofa waldorgomsisne,” jetti.
”Biyyoota alaatti, Awuroopaa fi Ameerikaattis fiilmiinii fi muuziqaan ni hojjetama garuu isaan carraalee hedduu waan qabaniif warra biyya keessaa waliin dorgomsiisuun ni ulfata,” jechuun sababa hojiilee biyya keessaa qofa waldorgomisiisan ibsiti.
OMN: Qophii Mike Coffman HR. 128 fi SR. 168 Amajjii 20, 2018